Iingxaki kumhleli wokubhaliweyo: Microstation V8 kwiVista nakwiWindows 7 -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Iingxaki ngomhleli wombhalo: I-Microstation V8 kwi-Vista kunye ne-Windows 7
Iinguqulelo zelifa leMicrostation V8 kudala zikho, ziphakathi kuka-2001 (V8.1) kunye no-2004 (V8.5). Nangona kunjalo, njengezixhobo ezifanelekileyo ngokufanelekileyo kubasebenzisi abahlawulayo -si yaqonda-i layisense okanye bavelise imisebenzi yabo Isicelo esisisiseko (VBA) okanye ULwimi loPhuhliso lweMida (mdl), bayamelana nokufa kwintetho yabasebenzisi.
Ngokubanzi, xa usiya kwiWindows Vista okanye kwiWin7, iMicrostation isebenza ngesiqhelo. Ndizibonile iingxaki ezimbalwa kakhulu, nangona kucacile ukuba sithetha nge Microstation kuphela; IJografi inolunye uhlobo lwe elishumi elinesithandathu.
Enye yezo ngxaki ngumhleli wokubhaliweyo (Ngokubanzi kuyenzeka xa sihlaziya i-Internet Explorer kuguqulelo lwamva nje). Xa isicatshulwa sicofa kabini okanye umyalelo wenziwe wasebenza, iwindow iyavela kodwa ayikuvumeli ukuhlela. Esona sizathu soku kukuba amathala eencwadi asebenzisa ezi nguqulelo ze-WYSIWYG kumhleli wesicelo seDHTML (I-DHTML Editing Component yeZicelo) ukuba ngoku iVista kunye ne-Windows 7 zisuswe ngenxa yokuba zibangele ubungozi kwi-Internet Explorer.
Abanye bade bachaza ukuba iMicrostation V8 ayisayi kuphinda isebenze kwiVista, kuphela iinguqulelo zamva nje ezinje ngeV8.9 (XM) okanye 8.11 (V8i). Kodwa enyanisweni kuya kufuneka ufake usetyenziso lweMicrosoft olubizwa ngokuba DHTML Editing Component. Oku kusebenza njengoluhlobo lwe-ActiveX, olungenayo injongo yesigqirha kodwa kuba izicelo zabaxhasi, kwaye luvumela ukuphuhlisa ukusebenzisa lo lawulo ukuba luhambelane neenguqulelo ezintsha njenge-Access 2003.
Ikhutshwe kule dilesi:
Emva koko kufakwe kwaye ilungele, iMicstation V8 ingaphila iintsuku ezimbalwa.
Masibuyele kwi talente
IJAIRO AGUIRRE uthi:
EWE KUHAMBA KAKUHLE ...
Enkosi kakhulu ngegalelo… ngoku ndinokuhlela kwakhona izicatshulwa… ubabalo !!!
URafael Maia uthi:
isou i-dias ebonakala i-seguinte mensagem
ikhompyuter ine-hyper-threading enikwe amandla. Ukusebenza kweMicroStation kunokuba ngcono ukuba i-hyper-threading ikhubazekile. Sebenzisa indawo yekhompyuter ye-BIOS yokwenza okanye ukukhubaza i-hyper-threading.
Ndiyabulela umhlobo, ngenxa yeminikelo yakho, nayiphi na inkcukacha esenziwe ukuba ilandelwe bonke
UMarc Miquel uthi:
Unombulelo oluninzi ngokusombulula ingxaki yomhleli wombhalo owangithatha iintsuku ezintathu ukuvavanya, de ndagqiba ekubeni ndibuze kwi-intanethi.
arturo ignacio olivares uthi:
Igalelo elimnandi kakhulu landibulela kakhulu umbulelo
Ewe ... akufuneki ndibenangxaki.
ukuyeka i-carias zepeda uthi:
Ndifuna ukubuza malunga nendlela yokujonga ngayo iifomati ze-UTM zamaphepha-mifanekiso ukuze zifake iipopu zibonise kuzo kwaye zilungiselele izicwangciso.
Friend Umhleli, mna uneengxaki main menu ka Microstation wabona ukuba le ngxaki kukuba ukuthoba indlela esele yenziwe kwaye abafake kumatshini yam kodwa kuthiwa MicroStation kwaye nqakraza-umbhalo umhleli kunye sele ifakiwe kule nkqubo na I ukusebenzisa nantoni na . Ndixelele ukuba ndiyaphupha nayiphi na inyathelo kuba akukho ithebhulethi evela kwiMenu enkulu yaqalisa ukusebenza. Impilo kwintsapho.